Manomboka Mandrava Ny Tora-pasika An-tanandehibe Sisa Tavela i Beirota · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2016 13:48 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, Türkçe, русский, English
Ny tora-pasika Ramlet El Bayda tamin'ny Asabotsy 12 Nov 2016. Sary: Firas BouZeineddine / Facebook
Tohina ny mponina ao Beirota ny asabotsy 12 Novambra lasa teo rehefa nanomboka nivezivezy tao amin'ny media sosialy ny sary mampiseho ny morondranomasina sisa farany ho an'ny daholobe, Ramlet El Bayda izay ravain'ny fitaovam-panorenana goavana.
Nalain‘i Joumana Talhouk, ilay mpikatroka Libaney ny lahatsary voalohany ary nalefany tao amin'ny Facebook:
Nivoaka voalohany tamin'ny lohatenim-baovao teo aloha tamin'ny 2012 ny adihevitra momba ny tompon'ny Ramlet El Bayda, ary nanomboka tamin'izay nifandritahan'ireo mpikatroka, taty ankilany, sy ny mpandrafitra rindranasan'ny tany aman-trano miaraka amin'ny manam-pahefana, tetsy andaniny.
Tamin'ny Jona 2016, nandà ny sahoan-dresaka mikasika ny fanakatonana ny tora-pasika hanaovana fananganan-trano ireo manam-pahefana taorian'ny nandravan'ireo fiarabe mpandavaka ny toerana.
Nilaza i Ziad Chebib, governora ao Beirota hoe :
Tsy hakatona ny tora-pasika ho an'ny daholobe Ramlet El Bayda, ary voarara tanteraka ny famerana amin'ny endriny rehetra ny olom-pirenena amin'ny fidirana ny morontsiraka, na izany noho ny fanorenana na fananganana fefy hanakatonana ny faritra.
Amin'ity tranga ity, mirona mankany amin'ny mpikatroka ny lalàna. Eny tokoa, milaza ny “Andininy faha-2 amin'ny Fehezan-dalàna faha 144,” mifehy ny fananana amorontsiraka ao Libanona nanomboka tamin'ny 1925, fa heverina ho fananam-bahoaka ny morondranomasina hatrany amin'ny faritra lavitra tongan'ny onja mandritra ny ririnina sy ny morontsiraka fasika sy vatoina .
Na dia teo aza izany lalàna izany, nahatonga fivoarana bebe kokoa amin'ny morontsiraka Libaney ny fiovan'ny didim-panjakana sy ny fahabangana eo amin'ny lalàna.
Tsy vao voalohany tamin'ny fanavaozana ny morontsiraka any Libanona atao amin'ny fananam-bahoaka ity tranga ity. Vao haingana, nanao hetsi-panoherana ireo mpikatroka manohitra ny drafitry ny governemanta hanova ny morondranomasina vatoina ao Kfarabida any amin'ny distrikan'i Batroun any Avaratr'i Libanona ho lasa Yacht Club hafa (fiantsonan-tsambon'ny mpanana) .
Niteraka adihevitra be ihany koa ny maha ara-dalàna ity tetikasa ity satria didy maro no nanalana ary nampiasaina ny didy hitsivolan'ny minisitera mba hahazoana ny fankatoavana ny tetikasa . Enim-bolana talohan'izay, noresahan'ny fampitam-baovao ao an-toerana ny olan'ny tora-pasika Adloun ao Atsimon'i Libanona. Notaterina ary fa noravana ny morontsiraka voajanahary ka hosoloina seranan-tsambo mitentina 26,6 tapitrisa Dolara Amerikana ary horavana ao anatin'ny dingana ny seranan-tsambo Fenisianina izay manana dikany ara-kolontsaina ambony sy sarobidy ara-tantara. Nanomboka tsy nisy vinavina ny mety ho vokatra aterak'izany eo amin'ny tontolo iainana ny fandavahana izay nahatonga ny fifandirana teo amin'ny Minisiteran'ny Asa Vaventy sy ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Kolontsaina.
Ramlet El Bayda: Ilay Lasibatra Farany Tamin'ny Kolikoli-panjakana :
Ao anatin'ity lohahevitra ity no tokony ahitantsika ny raharahan'ny Ramlet El Bayda.
Antsoina hoe Achour Development ny orinasam-pananganana trano voatendry hikarakara ny tetikasa Naorina tamin'ny taona 1991, hampivelatra “Toerana Fialan-tsasatra Eden Rock ” ao amin'ny morondranomasina Ramlet El Bayda ny Achour Development. Nanangana tetikasa manerana ny Beirota toy ny trano fonenana sy indostria goavana ny orinasa. Eo “an-dalam-panorenana” ny Toerana Fialan-tsasatra Eden Rock amin'izao fotoana izao ary anilan'ny tora-pasika avokoa ny trano fialofana 110 sy ny tranokely 53 , araka ny fitantaran'ny tranonkalan'ny orinasa.
Ity no sarin'ny tora-pasika tamin'ny taona 2011:
Sary: Le Coeur A Droite
Ary tahaka izao ny endriky ny toerana rehefa vita:
Pikantsary avy amin'ny tranonkalan'ny Fampandrosoana Achoura
Tsy ilaina akory ny milaza fa maro no tsy faly amin'ireto fivoarana farany ireto.
Nisy hetsi-panoherana nokasaina hatao ny Alahady 13 Nov 2016 teo. Mivaky toy izao ny famaritana ao amin'ny pejin'ny hetsika:
Satria fananan'ny besinimaro ny morontsiraka, hihazakazaka isika rahampitso hitaky ny fampitsaharana ny asa fanorenana eo amin'ny Ramlet El Baida. Hijoro manemitra ny morontsiraka isika ( miala eo Manara hatrany Raoucheh ) ary hizotra mankany amin'ny toerana itrangàn'ny heloka bevava aorian'ny fandalovan'ny mpihazakazaka [misy ny Marathon fanao isan-taona ao Beirota]. Raha tsy mihazakazaka hamonjy ilay sisa farany amin'ny morondranomasina ao Beirota isika, dia tsy manana Beirota hihazakazahana intsony.
Mandritra izany fotoana izany, maro ny Libaney nisafidy ny media sosialy mba hanehoany ny hatezerana.
Teny an-toerana tamin'ny alahady maraina ireo mpikatroka Libaney roa, Firas Bouzeineddine sy Whard Sleiman, raha mbola nifantoka tamin'ny Marathon Beirota ny sain'ny fampitam-baovao .
Nanoratra i Kareem Chehayeb, Libaney mpikaroka sady mpikatroka hoe:
Tanàndehibe amorondranomasina amin'ny fomba ofisialy tsy misy tora-pasika ho an'ny daholobe i Beirota. Tsy eo intsony i Ramlet El Bayda . Lahatsary avy amin'ny @joumanatalhouk https://t.co/H1SAiDHTPz
Nanoratra i Ziad Nabulsi ao amin'ny bilaogy Mouwaten hoe:
Veloma i Ramlet El Bayda, ilay tora-pasika ho an'ny daholobe sisa tavela ao #Beirut. https://t.co/mrSJNaFpxv
Nanamafy ilay mpikaroka Libaney sady toniandahatsoratry ny vaovao Al Akhbar teo aloha Lara Bitar fa i Beirota no ho voalohany amin'ny tanàndehibe Mediteraneana tsy misy morontsiraka raha tsy misy na inona na inona atao, sy ny hoe ahoana no mety ho fiantraikan'izany eo amin'ireo tena mahantra:
Noho ny herisetra atao amin'ny Ramlet El-Bayda, eo an-dàlana mba ho lasa voalohany amin'ny tanàndehibe Mediteraneana tsy misy morontsiraka i Beirota https://t.co//aaodNDWuan
Naneho hatezerana ihany koa ny Dr. Tarabay Rima, Libaney mpikaroka :
Izany no zava-mitranga eto #Libanona fandravana ny moron-dranomasina ! tora-pasika ho an'ny daholobe! #beirut aiza ny fanjakana? @LBpresidency @saadhariri https://t.co/HmnR6YnPmZ
Nanoratra ity sata ity tao amin'ny Facebook i Ibrahim Youssef, Libaney mpianatra sady mpikatroka :
Tsy voafaritro ny hatezerako avy amin'izany. Lasan'ny orinasa tsy miankina ny tora-pasika farany ao Beirota. Eto isika dia mahita ny zo ara-dalàmpanorenana hiditra malalaka amin'ny morontsiraka. Mahazo tora-pasika mihaja tsara ho an'ny fialan-tsasatra kosa isika etsy andanin'izany izay ny ampahan'ny mponina manam-bola ihany no afaka miditra aminy. Toy ny zava-drehetra ao amin'ny firenena, misy ny fahazarana manipy zava-tsarobidy eny am-baravarankely raha mamafa ny zava-drehetra izay naha izy azy ny tanandehibe na ny tokony ho izy aminy ireo rafitra be rentirenty fotsiny.
Ary ny tsara indrindra? Nanana ny fahafahana hifidy governemanta monisipaly ny mponina izay mety ho nisoroka izany (indrindra ) mba tsy hitranga. Kanefa ry fako efa antitra mpiaro ny tombontsoan'ny sangany ara-politika eto amin'ny firenena ihany no nofidiantsika.
Veloma Ramlet El Bayda. Arahabaina isika rehetra.
Nizara ny lahatsary nalain'i Joumana Talhouk ny fanentanana Beirota Madinati, sady naneho hevitra hoe:
Amin'izao fotoana izao, manatrika ny fandringanana ny tora-pasika mitohy sy ny fanombohan'ny tetikasa fampiasam-bola ao amin'ny ramlet El Bayda, ilay tora-pasika ho an'ny daholobe ao Beirota isika, na dia teo aza ny fanoherana sy ny fiovan-kevitra rehetra. Mandika lalàna sy fitsipika rehetra mikasika ny fiarovana ny fananam-bahoaka sy ny tombontsoa ao an-tanàndehibe ny tetikasa. Manana ny fahefana rehetra hampitsaharana ny tetikasa Edena Rock izay tsy manaja ny fepetra ara-tontolo iainana sy mandika ny lalànan'ny fananan-dranomasina ny governora eto Beirota. Tsy tokony hijanona hangina manoloana ity heloka bevava ity isika!
Nanomboka nampiasa ny tenirohy Arabo #بيروت_بلا_شط ny sasany izay midika hoe “Beirota tsy misy morontsiraka”:
Ry Beirota mahantra, rehefa nangalarin'izy ireo ny hatsaran-tarehiny sy ny tsio-drivotra vaovaony, eto izy ireo dia manimba ny tora-pasika ho an'ny daholobe! Rahoviana ny tanàndehibe-ko vao tsy ho lasibatra ka hikomy hanohitra ireo mpandika lalàna ?
Naneho hevitra i Steven Salaita ,akademika Palestiniana-Amerikana sady filohan'ny Fianarana Amerikana Edward Said ao amin'ny Oniversite Amerikana ao Beirota hoe:
Manantena aho fa hitelina ny rano ary hahazo aretim-pivalanana tsara ny mpananga-trano izay vao nandavaka an'i Ramlet El Bayda, tora-pasika ho an'ny daholobe sisa farany eto Beirota .
Nanampy tamin'ny fanantontosana ity lahatsoratra ity i Elias Abou Jaoude.